AHOANA NO HANAISOTRA NY UAC AMIN'NY WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Ahoana no hanaisotra ny UAC amin'ny Windows 10
Ny Account Account User na UAC amin'ny Windows 10 dia mampita anao rehefa manomboka programa na manatanteraka hetsika izay mitaky zon'ireo ordinatera amin'ny solosaina (izay midika fa ny programa na ny hetsika dia hanova ny fikirakirana na ny rakitra). Natao izany mba hiarovana anao amin'ny hetsika mety hampidi-doza sy hanokatra rindrambaiko izay mety hanimba ny solosaina.
Matetika ny UAC dia alefa ary mitaky fanamafisana ny fihetsiketsehana rehetra mety hisy fiantraikany amin'ny rafi-piasana, na dia afaka manaisotra ny UAC ianao na mametraka ny fampandrenesana amin'ny fomba mahazatra. Any amin'ny faran'ny boky fampianarana, dia misy koa lahatsary iray mampiseho ny fomba roa hanafoanana ny Windows Control 10.
Fanamarihana: Raha toa ka misy fanaraha-maso ny kaonty aza, ny iray amin'ireo programa dia tsy manomboka amin'ny hafatra izay nanakanan'ny mpitantana ny famonoana ity fampiharana ity, tokony hanampy ity torolàlana ity: Voasakana ny fampiharana amin'ny Windows 10.
Atsaharo ny fanaraha-maso ny kaonty User (UAC) eo amin'ny tontonana
Ny fomba voalohany dia ny fampiasana ny singa mifandraika ao amin'ny tontonan'ny Windows 10 mba hanovana ny fanovana ho an'ny fanaraha-maso ny kaonty. Tsindrio eo ankavanana amin'ny menu Start ary mifantina ny singa Control Panel ao amin'ny menu context.
Ao amin'ny tontonana fanaraha-maso eo an-tampon'ny havanana amin'ny sehatra "View", tsindrio "Ikon" (fa tsy sokajy) ary fidio "User Accounts".
Ao amin'ny varavarankely manaraka, tsindrio ny singa "Fanovana Control Control Settings" (ity zo mitaky ny zon'ny mpifidy). (Afaka miditra amin'ny varavarankely havanana koa ianao - manindry ny fanendry Win + R ary midira UserAccountControlSettings ao amin'ny "Run" window, ary tsindrio ny Enter).
Azonao atao ny manitsy ny asan'ny Account Account User na manakana ny UAC amin'ny Windows 10, mba tsy hahazoana fampahafantarana fanampiny avy amin'izany. Safidio fotsiny ny iray amin'ireo safidy hananganana UAC, izay misy efatra.
Ampahafantaro foana fa rehefa miezaka mametraka rindrambaiko na manova ny solosaina ny fampiharana - ny safidy azo antoka ho an'ny hetsika mety hanova zavatra, ary koa ho an'ny hetsika ataon'ny programa hafa, dia hahazo fampahafantarana momba izany ianao. Mpampiasa matetika (fa tsy mpandrindra) no mila miditra amin'ny tenimiafina mba hanamafisana ilay hetsika.
Ampahafantaro raha ny fampiharana manandrana manova ny ordinatera - ity safidy ity dia apetraka amin'ny alàlan'ny Windows 10. Midika izany fa ny hetsika amin'ny programa ihany no mifehy, fa tsy ny hetsika ataon'ny mpampiasa.
Ampitandremana raha toa ka manandrana manova ny ordinateranao ny fampiharana (tsy mampihorohoro ny tontonana). Ny fahasamihafana eo amin'ny fehintsoratra teo aloha dia ny hoe tsy voafehy na voasakana ny birao, izay mety ho loza mitatao amin'ny sehatra sasany (viriosy, trojan).
Aza mampahafantatra ahy - Ny UAC dia manala baraka ary tsy mampahafantatra ny fanovàna eo amin'ny sehatry ny solosaina napetraky ny anao na ny programa.
Raha manapa-kevitra ny hanaisotra ny UAC ianao, izay tsy fanao mahazatra mihitsy, dia tokony hitandrina tsara amin'ny hoavy ianao, satria ny programa rehetra dia hanana fidiram-bola mitovy amin'ny anao ihany, fa ny UAC dia tsy hilaza aminao raha misy Mitsabo tena loatra izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha ny antony hanafoanana ny UAC ihany no "manelingelina" azy, dia manoro hevitra mafy aho ny hamadika izany.
Manova ny fikirakirana UAC ao amin'ny tonian-drakitra misokatra
Ny fanesorana ny UAC sy ny fisafidianana ny iray amin'ireo safidy efatra ahafahana mampiasa Windows 10 Control User Account dia azo atao ihany koa amin'ny fampiasana ny fanontana registry (hanombohana azy, tsindrio Win + R amin'ny klavier sy ny karazana regedit).
Ny fikirakiran'ny UAC dia voafaritra amin'ny fanalahidin'ny rejisitra telo hita ao amin'ny fizarana HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies System
Mandehana ao amin'ity fizarana ity ary tadiavo ireto fepetra DWORD manaraka ireto eo amin'ny faritra havanana amin'ny varavarankely: PromptOnSecureDesktop, EnableLUA, ConsentPromptBehaviorAdmin. Azonao atao ny manova ny soatoavina amin'ny dika-tsindrimandry. Avy eo dia ambarako ny soatoavin'ny tsirairay amin'ireo fanalahidy araka ny filaharan'izy ireo voatondro ho an'ny safidy samihafa ho fampandrenesana fitantanana ny kaonty.
Ampahafantaro mandrakariva - 1, 1, 2.
Ampahafantaro raha toa ka manandrana manova ny marika (default values) ny rindranasa - 1, 1, 5.
Ampitaho tsy misy dikany ny efijery - 0, 1, 5.
Atsaharo ny UAC ary manaova tatitra - 0, 1, 0.
Heveriko fa misy olona afaka manoro hevitra ny fanalavirana ny UAC amin'ny toe-javatra sasany dia afaka hamantatra ny zavatra izay, tsy sarotra izany.
Ahoana no hanaisotra ny UAC Windows 10 - lahatsary
Na izany aza, dia somary fohy kokoa, ary amin'ny fotoana iray mazava kokoa amin'ny lahatsary etsy ambany.
Farany, avelao hampahatsiahy anao indray aho: Tsy manakana ny fanaraha-maso ny kaontiko amin'ny Windows 10 na amin'ny OS hafa, raha tsy hoe tsy mahafantatra izay ilainao ianao ary koa mpampiasa za-draharaha.